Olee otú mbupụ iTunes Playlist na Music Files
Ọtụtụ n'ime ndị ugboro a onye ọrụ kwesịrị nyefee ma ọ bụ mbupụ a playlist n'ihi na eziokwu na ọ na-achọ-ekere òkè na ndị ọzọ mere na ọ dịghị mgbe ha ga-aga site n'otu ọtụtụ usoro nke na-achọ ma na-ekpokọta songs dị ka onye ọrụ mere. Ọ bụrụ na a playlist e chikọta eburu n'uche ọ bụla pụrụ iche mgbe ahụ, ọ bụ maa oké ọnụ ahịa na onye ọrụ na-enyefe ya na ndị ọzọ na-eme ka n'aka na ha nwekwara ike igwu na-enweta ya na otu oge ahụ bụ nke yiri genre. The iTunes playlist na-kpọfere ngwaọrụ ndị ọzọ na-eme ka n'aka na ọ na-nọ enem na ọ dịghị onye nwere ike ịnweta ya ruru ka egwu collection nke songs na-e na ya. A nkuzi e dere ịnọgide na-ele mkpa na chọrọ nke ọrụ mgbe ọ na-abịa iTunes playlist bupu.
Part1: Export iTunes Playlist na Music Files na iTunes
Part2: Export listi ọkpụkpọ site na iTunes gaa na Ederede
Part3: Export iTunes listi ọkpụkpọ iji iPhone / iPad / iPod
Part4: Issues na nyefe na TunesGo
Part1.Export iTunes Playlist na Music Files na iTunes
Ọ bụ a dị mfe usoro na-achọ a onye ọrụ na-nanị ịbụ ezigbo ọrụ nke iTunes software omume na ndị fọdụrụ na-niile mere na a ntabi anya. Iji mee ka usoro mfe onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na nzọụkwụ na-ọkọnọ na ebe a na nkuzi na-soro nzọụkwụ site nzọụkwụ iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu mgbe chere ihu na nke a na onye ọrụ na-aga n'ihu na-enweta iTunes listi ọkpụkpọ na o nwere kere. -Esonụ bụ ụfọdụ mfe nzọụkwụ aka na nke a:
m. Dị ka a nzọụkwụ mbụ onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na iTunes software na ulo oru:
ii. Site ugbu a iTunes nnọkọ ọ na-gwara pịa na playlist nhọrọ iji jide n'aka na usoro-aga n'ihu:
III. Na ekpe software panel onye ọrụ kwesịrị ka pịa playlist a ga-exported:
too ogologo. Ugbu a onye ọrụ kwesịrị ka-eso ụzọ File> Library
v. Mgbe ahụ bupu playlist nhọrọ bụ pịrị ka e pụta ìhè:
vi. Na ọhụrụ faịlụ na-emepe onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ụdị nke faịlụ na-ahọrọ dị ka XML faịlụ megide "Save dị ka ụdị". Nke a ga-mezue usoro na zuru:
Part2.Export listi ọkpụkpọ site na iTunes gaa na Ederede
Usoro nke na-azọpụta iTunes ka ederede bụ pụtara dị mfe na ọ fọrọ nke nta yiri onye na e kwuru n'elu. Nanị ihe dị iche bụ na-eme ka n'aka na Save dị ka ụdị na-agbanwekwa ederede na ikpeazụ nzọụkwụ. N'ihi na onye ọrụ mma usoro a Otú ọ dị ugboro ugboro zere ihe ọ bụla mgbaka na mgbagwoju anya:
m. Ẹkedori iTunes:
ii. Pịa playlist na isi mmanya mgbe ugbu a nnọkọ a na-egwuri:
III. The playlist na-exported bụ na-ahụ pịrị na ekpe panel nke iTunes:
too ogologo. Pịa File> Library> bupu playlist
v. Site ọzọ window na Pop elu onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na "Save dị ka ụdị" na-ahọrọ na-ederede. Ọ bụrụ na usoro choro usoro ndị UTF -8 bụ na-ahọrọ. Kụrụ ịzọpụta na mezue usoro:
Part3.Export iTunes listi ọkpụkpọ iji iPhone / iPad / iPod
Ọ bụ mfe usoro nke na-eme ka ndụ dịkwuo mfe n'ihi na ọtụtụ ọrụ na N'ihi ya, ha dozie a nke site mfe ejikọta ha ngwaọrụ na kọmputa na-ebufe ọdịnaya ka ọhụrụ iDevice dị ka kwa ha chọrọ. Iji mee ka ọ dị mfe a nkuzi ga ugbu a mara ọrụ banyere iTunes playlist Mbupụ na iPhone na ndị ọzọ na iDevices na ala dị ka afọ ojuju:
m. Onye ọrụ kwesịrị ka jikọọ Apple si ngwaọrụ na kọmputa site na iji eriri USB na-amalite usoro:
ii. Ozugbo ọ e mere onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na iExplorer a na-ahụ ulo oru na Mac ma ọ bụ PC ihe ọ bụla genre nke igwe bụ:
III. The iExplorer bụ ịchọpụta na ngwaọrụ na ga-egosipụta na ya. Na-ele music onye ọrụ kwesịrị ka pịa music na ekpe panel na mgbe ahụ mkpa playlist:
too ogologo. Ugbu a onye ọrụ kwesịrị ka na-eso Nyefee> Nyefee dum playlist ka iTunes ụzọ na-aga n'ihu iji hụ na usoro na-aga n'ihu were were na enweghị ihe ọ bụla hassle:
v. Iji mezue usoro onye ọrụ kwesịrị imechi na Malitegharịa ekwentị ahụ iTunes software na mgbe ahụ na-eme ka n'aka na iche na ngwaọrụ bụ ejikọrọ na otu PC na iTunes na-synced na ya na ndị ọhụrụ playlist na-agafere ndị ọhụrụ ngwaọrụ enweghị ọ bụla nke.
Part 4. Issues na nyefe na TunesGo
Mgbe onye ọrụ Nyefe playlist nke ọzọ iDevices ochie playlist na-ehichapụ ozugbo. Ọ bụ ihe nke na-echegbu onye ọrụ a ọtụtụ n'ihi na eziokwu na ọ fọrọ nke nta onye ọ bụla chọrọ ka ochie playlist na mbụ ya ebe. Iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu mgbe chere ihu ọ na-gwara ibudata na ịwụnye TunesGo nke bụ ihe magburu onwe omume mepụtara site na Wondershare. Iji jide n'aka na needful na-enweta enweghị ihe ọ bụla nke onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị na-esonụ usoro a replicated on ha na nwoke PC ma ọ bụ Mac si iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri:
m. Ihe omume ahụ bụ na-ibudatara www.wondershare.com/tunesgo/ ka kacha ọhụrụ version bụ mgbe e na-akwado mkpa nke ọrụ. Ozugbo ọ e ebudatara onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ọ na-ulo oru nke mere na isi interface-egosi:
ii. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ijikọ iDevice na kọmputa na enyemaka nke USB na-abịa tinyere:
III. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ka pịa tinye na n'elu nke usoro ihe omume window ka anya dị ka media achọpụtara n'elu ngwaọrụ:
too ogologo. Smart Mbupụ na iTunes a na-ahụ na-pịrị iji jide n'aka na mgbasa ozi na-synced na iTunes software:
v. Ozugbo ọ e mere onye ọrụ nwere ike itinye lekwasịrị iDevice na kọmputa otu ugboro ọzọ na-eme ka n'aka na media exported ka iTunes na-synced na ngwaọrụ na-ọrụ ahụ.
Easy ụzọ ịkọrọ iTunes listi ọkpụkpọ na ndị ọzọ
Mfe Nyefee iTunes Playlist ka iPad
> Resource> iTunes> Olee mbupụ iTunes Playlist na Music Files